Global Voices teny Malagasy » Guatemala: Fanimbàna ny varavaran’ireo toeram-pivarotan-tena [bordel] · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Desambra 2009 6:35 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Candy
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Lalàna, Zon'olombelona
Julio Roberto Prado dia mpisolovava Goatemalteky izay matetika manao fanadihadiana sy manenjika ny varotra olona, indrindra ny fanararaotana atao amin'ireo vehivavy sy ankizy. Rehefa mitoraka blaogy izy dia mitondra solonanarana, izay ahafahany mamoaka ny heviny malalaka momba ny toe-javatra sarotra iainan'ireo tra-pahavoazana. Ity lahatsoratra vao haingana tao amin'ny blaoginy Noticias Para Dios ity dia manoritsoritra ny sasany amin’ireo lafiny sy akon’ny fiainana andavan’andro any amin’ny asany [es] , izay hangatahany fahazoan-dalana hanao fisavàna avy amina mpitsara. Avoitran'ny lahatsorany ihany koa ny vokatry ny fiasàna anaty tontolo mampiady saina sy mandreraka toy izao amin'ny toe-tsain'ireo mifofotra hamongotra ny famarotana olona sy ny fanararaotana.
Nanaovako ny kiraro maintiko, ndao ary, ny rehetra dia samy efa mahalala fa rehefa eny amiko ireny dia hisy varavarana ho potika izay. Androany dia hanavotana vehivavy 11 taona sy ny rahavaviny 15 taona avy amin'ny iray amin'ireo toeram-pivarotan-tena sy ‘bordel’ isan'ny lehibe indrindra eto an-tanàna izany.
Mizara ny lamin'asany isan'andro amin'ny sasantsasany amin'ireo mpiara-miasa aminy mpampanàja lalàna izy:
Ny maha-tanora azy no ankafizan'ny lehilahy azy ireo, hoy ny iray amin'ireo polisy manamboninahitra. Mitantara amiko izy fa indray andro nandeha tany anatin'ny tanànan'ny Retalhuleu, ka nidirany tamina toerana iray hamonjena vehivavy voafatotra amin'ny fandriana, anerena azy ireo hanao firaisana ara-nofo amin'ireo mpanjifa. Mahia kely avokoa izy rehetra, hoy izy. Nampalahelo ahy ry zareo, tsy mihinan-kanina, ary reraky ny miankanjo irony karazam-pitafiana irony. Inona ankoatr'izay no andrasana amin'ny toerana tahaka itony, indraindray aza ireo toerana sasany manao lavanty vehivavy mbola virijiny isaky ny Zoma voalohan'ny volana.
Mba hahazoana ilay fahazoan-dalana hanao fisavàna, mila milahatra i Prado hihaona amin'ilay mpitsara sy hanazava azy ny toe-javatra. Raha teo am-pilaharana izy dia nandinika ny sasany tamin'ireo tranga mampalahelo niainan'ireo tra-pahavoazana:
Vao tonga aho dia efa nisy filaharana lava be niandry ahy. Niandry ny anjarako aho hiresahako amin'ilay mpitsara sy hanazava aminy fa mila miditra an'ilay toeram-pivarotan-tena sy ‘bordel’ izahay [mba hamonjena ireo ankizy]. Mifanatrika tamiko, nisy vehivavy toa niharan'ny daroka. Mizara ny fotoanany amin'ny tomany sy fandrotsirotsiana ny zanany lahy eny an-tanany izy, ary misy ankizivavy kely iray mitazona ny tongony. Te-hifoka sigara aho. Te-handrehitra sigara aho ary hamono azy ao amin'ny tanako havia dia hifoha amin'izay.
Maheno vehivavy nodarohan'ny vadiny aho. Aoriako misy zazavavy miaraka amin'ny raiamandreniny. Nanararaotra azy izy ireo. Tadidiko fa hay moa faran'ny volana izao. Lava iny faran'ny herinandro iny.
Nanohina mafy an'ilay mpisolovava ireny tantara ireny:
Tsy nahateny aho. Rehefa miasa miaraka amin'ny jalin'ny sasany ianao dia manomboka mahatsapa fahabangana any anaty any. Manome toerana ho an'ny hirifiry ianao, mamela azy hiaina ao anatinao. Heniky ny fijalian'ireo ankizy 12 nararaotina sy ireo tovovavy 22 nasaina nivaro-tena aho. Ireo no tranga niasàko nitondrana vahaolana vitsivitsy. Ireo tranga hafa tsy miaina ato anatiko, mitsetsitra ny aina hivoaka avy any anatiko ireny.
Nony farany tonga tany amin’ilay mpitsara ihany izy hangataka ilay fahazoan-dàlana hanao fisavàna dia nomena azy izany. Na izany aza anefa dia naharikoriko azy ireo fanamarihana nataon’ilay mpitsara:
Nolazainy tamiko fa hahazo hiditra [ao amin’ilay toeram-pivarotan-tena sy ‘bordel’] aho.
Teo am-pitsanganana, sady nanao veloma aho no nanokatra ny varavarana. Talohan’ny nivoahako, niteny tamiko ilay mpitsara, “mahafinaritra io toerana io, feno ankizivavy mahafatifaty any. Raha mahita namako ao ianao dia mba karakarao tsara izy.” Nihomehy izy.
Niezaka ny nitsiky aho, fa raha ny marina dia fijery tsiravina ny ahy.
Teo am-pivoahany dia tsaroany tampoka ny zava-misy henjana amin’ny karazana tranga toy itony:
Ao ivelany, mampangina ny zaza eny an-tratrany ilay vehivavy voadaroka ary mitomany miaraka amin’ny reniny ilay tovovavy noararaotina.
Anjaran-dry zareo izao ny miresaka sy manazava amin’ilay mpitsara ny fijalian’izy ireo. Izaho kosa, handeha hivoaka any an’arabe, tsio-drivotra, setroka ary kotaba no mampatsiahy ahy fa Alatsinainy anio. Andro iray hafa izay hiverimberina mandra-paha…
Niakatra tao anaty fiara aho handeha hanavotra ireo ankizivavy. Fantatro fa tsy hahita tory koa aho anio alina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/12/18/4371/
 manoritsoritra ny sasany amin’ireo lafiny sy akon’ny fiainana andavan’andro any amin’ny asany [es]: http://noticiasparadios.blogspot.com/2009/11/juez.html